🥇 ▷ Wax kasta oo aan ka ogaanno Huawei Mate 30 cusub, Pro, Lite iyo Porsche Edition ✅
Wax kasta oo aan ka ogaanno Huawei Mate 30 cusub, Pro, Lite iyo Porsche Edition
Haddii wax uun tahay qeybtii labaad ee sanadka qeybta Telefoonada Gacanta, xaqiiqdii waa mid daran. Sababtoo ah bilow ahaan bil gudaheed, koofiyado heer-sareeya oo heer sare ah sida Samsung ayaa sida caadiga ah lagu soo bandhigaa Galaxy Note 10 Samsung-ka iyo iPhone 11-ka Apple. Soo bandhigida cusub ee ‘Huawei Mate 30’ oo loo dejiyey maanta 19-kii ilaa 2-da fiidnimo ee Munich oo aad ku arki karto halkan si toos ah, bal aan eegno wax kasta oo ilaa iyo hadda ku soo dhacaya garoomada, kuwaas oo aan aad u yarayn:
Raac wax kasta oo dhaca daqiiqada daqiiqada daqiiqada: Huawei Mate 30 Pro.
Dahabka qaaliga ah ee taajka, ‘Huawei Mate 30 Pro’ sida ku xusan shaandhaynta ‘la gudbiyey’ waxay lahaan doonaan a ‘Cataract’ 6.7 inch Super AMOLED Quad HD + bandhigay, taas oo ka dhigaysa 0.4 inji dherer ka dheer Mate P30 Pro horaantii sannadkan iyo 0.1 ” ka weyn tan Mate 20 Pro ee 2018. Guddigu wuxuu muujinayaa geesaha dhinacyada dhinac ilaa dhinac, iyo muuqaal sare oo weyn oo ku habboon xanta la sheegayo. Kaamirada ‘Triple Lens Selfie Camera’, oo noqon doonta mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee lagu iftiimiyo.
Markaan u weecinno waxaan aragnaa a Kaamirooyinka muraayadaha indhaha ee afarta gees leh ee lagu xiray waxa loo xaqiijiyo ayaa sheegaya in Mate 30 Pro wuxuu noqon doonaa bahal leh 7 kamarado ah waxba kama yara. Oo markii akhristaha faraha faraha gadaal looga mahadcelin doono, waa in loo qaataa in tan lagu dhexgali doono shaashadda hoosteeda sida tan moodelka 2018. Gudaha, barnaamijka Mate 30 Pro wuxuu higsanayaa inuu ahaado awood saafi ah, oo kor loogu qaado jiilkii ugu dambeeyay Kirin 990 processor oo ay soo saartay Huawei lafteeda oo ay ku soo bandhigeen munaasabadda IFA maalmo ka hor. Chipset-ka waxaa taageeri doona qaabeynta 8GB oo RAM ah iyo 512GB booska gudaha lagu fidin karo by Kaararka NM, kaas oo ah nooca Huawei ee microSD u gaar ah.
Si loo quudiyo set oo dhan waxaa jiri doona wax weyn 4,500 mAh batari, iyo nidaam ahaan qalliin waxaan ku yeelan doonnaa – aragti ahaan – nooc il furan oo ah Android 10 oo leh lakab u sameynta EMUI 10, laakiin, waana tan meesha aan ku heysano hal dhibic colaadeed, iyadoo aan taageero laga helin dalabyada Google. Taasi waa, Gmail majiraan, Khariidado Google malaha, Dukaan Ciyaar ma leh, inkasta oo ay jiri karaan noocyo kuwan ama wax la mid ah oo ka mid ah Huawei OS cusub, HarmonyOS.
Ku haynta naqshad la mid ah, nooca caadiga ah ee moobaylka ayaa sii ahaan doona casriga xoogga badan, in kasta oo ay jiraan waxyar oo dheeraad ah. Shaashadda ayaa la filayaa inay waxyar ka yaraato, in kasta oo haddii ay ugu dambayn ku tahay qaab la mid ah tii sanadkii hore ee Mate 20, golaha Mate 30 wuxuu waxyar ka weynaan doonaa Mate 30 Pro, in kasta oo uu xallinteeda ayaa noqon doonta FullHD + mana aha Quad HD +. Waxyaabaha la rajeynayo ayaa ah in Mate 30 uu leeyahay akhristaha sawirka faraha sidoo kale shaashadda ka hoosaysa.
Gudaha waxay sidoo kale kor u qaadi doontaa isla Kirin 990 chipset, oo lagu daydo 4GB iyo 6GB oo RAM ah si aad u doorato iyo booska gudaha laga bilaabo 128GB iyada oo ikhtiyaar loogu sii ballaarinayo kaararka NM. The Rear camera wuxuu noqon doonaa lens Triple, mid ayaa jidka lumay iyadoo la ixtiraamayo Mate 30 Pro. The baytariga ayaa xoogaa yar, 4,200 mAh, iyo Android 10 ayaa sidoo kale la filayaa EMUI 10 inkasta oo aan lahayn barnaamijyada Google.
Huawei Mate 30 Lite iyo Porsche Design
Moodhka ‘Lite’ had iyo jeer waa mid la rajeynayo, maadaama aan aragnay inuu u muuqdo sanadihii ugu dambeeyay. Su’aashu waxay tahay bal aan ku arki doonno soo bandhigida maanta ama, sida caadiga ah, waxaa loo sameeyaa si loo baryo maalmo yar. Si kasta ha noqotee, nashqadeyntiisa ayaa sidoo kale la sifeeyay, oo ay ka go’an tahay meesha ka saar shaashaddeeda hore oo gabi ahaanba nadiifi.
Kaliya ayaa lahaan doona camera hore, oo raacaya isbeddelka Samsung ayaa shaashadda lagu dhex arki doonaa. Iyo kaamirooyinka, waxaa la filayaa inuu noqdo Labaal, oo leh dhabarka akhriska faraha-yar ee dhabarka, isla Kirin 990 iyo EMUI 10 processor barnaamijya la’aan Google.
Sida loogu talagalay daabacaadda ugu raaxada badan ee 4-ka boosteejada, the Huawei Mate 30 Porsche Design Waxaa sidoo kale la muujiyay, oo muujinaya a Kaamiradda dambe ee Quad sida Mate 30 Pro hal daboolka dambe ee maqaarka. In kasta oo in yar oo kale la arkay. Waqtigan xaadirka ah waxaas oo dhami, in kasta oo ay si hoose u daadatay, war aan rasmi ahayn illaa iyo 2da duhurnimo maanta. Immisa waxyaabood oo aan arki doonno dhamaadka ayaa la xaqiijiyey iyo garoomada maanta la arki doono?